नेपाली बालसाहित्यले अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको खिल्ली उडाइरहेको छ, यो पक्ष अब सुध्रिनु पर्छ कि पर्दैन ? किन साहित्यमा तल्लो जात नोकर भएको, अपाङ्ग अपहेलित भएको देखाउने ? फेरि हाम्रा कथामा प्रयोग हुने यस्ता वर्गलाई होच्याउने खालका उखान टुक्का राख्न पनि तुरुन्त बन्द गरिनु पर्छ कि पर्दैन ?
यसरी राष्ट्रकवि घिमिरेको काब्यकारितादेखि लिएर हालसम्म आइपुग्दा नेपाली बालसहित्यले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । पुस्तक र पत्रिकामा पढ्न सकिने बालसाहित्य आज इन्टरनेटमा बिश्वका पाठकले पढ्न सक्ने भइसकेको छ ।
पाठ्यपुस्तकमा दिइएको पाठ कसरी पढने ?
बहुमुखी बालप्रतिभा मोहकराज पाण्डे
बुवा डा. मनीषराज पाण्डे र आमा उपासना पाण्डेका छोरा मोहकराज पाण्डे बहुमुखी प्रतिभा भएका बालक हुन् ।